တစ်ချိူ့ ကိစ္စတွေဟာ ကံနဲ့မဆိုင်၊ ဥာဏ်နဲ့သာဆိုင်တယ်ဆိုတာ သိစေလို – Trend.com.mm
ရွေးချယ်လို့မရတာ ကံ ၊ ရွေးချယ်လို့ရတာ ဥာဏ်ပါ။ တစ်ချို့ ကိစ္စတွေမှာ တားဆီးပိတ်ပင်လို့ရမယ့် အင်အားမျိုး ကိုယ့်မှာမရှိဘူး။ သူ့အလိုလိုဖြစ်လာတယ်။ ရင်ဆိုင်ရမှာပါပဲ။ ရှောင်လွှဲလို့မရတာကို ကံလို့ခေါ်ပါတယ်။ ကိုယ့်မှာ ရွေးချယ်ဖို့ အခွင့်ရေးတွေ၊ အများကြီးရှိရက်သားနဲ့ သေချာဆုံးဖြတ်ဖို့ စဉ်းစားချင့်ချိန်ပေးမှာက ဥာဏ်ပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာ – ကိုယ့်အပေါ်မကောင်းတဲ့ ရည်းစားတစ်ယောက်ကို ချစ်တဲ့စိတ် ၊ သံယောဇဉ်တွေကြောင့် တွယ်ကပ်နေတာမျိုးက ကံနဲ့မဆိုင်တော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ဥာဏ်နဲ့ပဲ ဆိုင်ပါတယ်။ မကောင်းမှန်းသိရင် စွန့်လွှတ်ရဲတဲ့ သတ္တိမျိုးမမွေးနိုင်သေးတာပါ။ကိုယ့်ကိုမပျော်ရွှင်စေတဲ့အရာတစ်ခုကို ဘာလို့လက်မလွှတ်နိုင်တာလဲ …သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ မင်းရဲ့မာနကြောင့်လား ၊ အတ္တကြောင့်လား ၊ ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်လား ?
အချစ်ရေးကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျနေချိန်မှာ တစ်ယောက်တည်းနေလိုက်ပါ။ ဒီတစ်ယောက်မကောင်းတာနဲ့ အားလုံးမကောင်းဘူးလို့ သိမ်းကျူံးပြီးတော့ မြင်လိုက်ရင်တော့ မင်းမှားသွားပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာကြောင့် အားလုံးကိုကြည့်တဲ့အမြင်ဟာ ဘောင်ကျဉ်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်သူမှ မကောင်းဘူးလို့ မင်းအော်နေတဲ့အချိန် တကယ်ကောင်းပြီး သစ္စာရှိတဲ့လူစားမျိုးမင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတာကို သတိမထားမိဘဲ လွဲသွားနိုင်တယ်။
လောလောဆယ် မင်းဆီမှာဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေဟာ မင်းအသိဥာဏ်နဲ့ ဘယ်လောက်ထိ ဖြေရှင်းနိုင်လဲဆိုတာကို လောကကြီးက စမ်းသပ်နေတဲ့သဘောပါ။ ပြဿနာတစ်ခုကို မင်းနိုင်အောင်လုပ်မလား … ၊အရှုံးပေးမလား ?အနိုင်အရှုံးဆိုတာ မင်းလုပ်ရပ်ပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်။ မင်းရဲ့အသိဥာဏ်တွေ ၊ ရင့်ကျက်မှုတွေနဲ့ပဲ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေမှာပါ။
” If there isawill there isaway ” တဲ့ ။ စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြရင် နည်းလမ်းဆိုတာ ရှိပြီးသားပါ။ ကိုယ့်ရဲ့အခက်ခဲကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားချင်ရင် နည်းလမ်းတွေ့အောင်ရှာရမယ်။ အဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေ့နိုင်ဖို့ဆိုတာလည်း မင်းရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေမှ ဖြစ်မယ်။
အရာရာတိုင်းဟာ ဖြစ်ပြီးပျက်နေတာပါ။ ဘယ်အရာမှာ မတည်မြဲဘူး ။ ဘယ်အချိန်မှာအရာအားလုံး ပြီးဆုံးသွားမယ်ဆိုတာ မသိပေမယ့် ဥာဏ်ပညာကို ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တဲ့သူဟာ လောကဓံရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကြုံလာတဲ့အခါ သူများတွေလောက် တော်ရုံ မတုန်လှုပ်တော့ဘူး။ ဒါတွေအားလုံး တစ်ချိန်မှာပြီးဆုံးသွားမယ်လို့ နှလုံးသွင်းထားတယ်။ ဘယ်ကိစ္စမဆို သတိလေးကပ်ပြီး ဖြစ်လာနိုင်တာတွေကို ကြိုတင် မှန်းဆပါ။ ဖြစ်လာရင်လည်း ငါဘယ်လိုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတာကို တွက်ချက်ထားရင် ပျာယာခတ်နေစရာမလိုတော့ဘူး။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် အေးဆေးစွာနဲ့ပဲ ဖြေရှင်းသွားနိုင်မှာပါ။
ဒါကြောင့် တစ်ချို့ ကိစ္စတွေဟာ ကံနဲ့မဆိုင် ၊ ဥာဏ်နဲ့သာ ဆိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး စဉ်းစားတွေးတော ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြပါစေ …
ရှေးခယျြလို့မရတာ ကံ ၊ ရှေးခယျြလို့ရတာ ဉာဏျပါ။ တဈခြို့ ကိစ်စတှမှော တားဆီးပိတျပငျလို့ရမယျ့ အငျအားမြိုး ကိုယျ့မှာမရှိဘူး။ သူ့အလိုလိုဖွဈလာတယျ။ ရငျဆိုငျရမှာပါပဲ။ ရှောငျလှဲလို့မရတာကို ကံလို့ချေါပါတယျ။ ကိုယျ့မှာ ရှေးခယျြဖို့ အခှငျ့ရေးတှေ၊ အမြားကွီးရှိရကျသားနဲ့ သခြောဆုံးဖွတျဖို့ စဉျးစားခငျြ့ခြိနျပေးမှာက ဉာဏျပညာပဲဖွဈပါတယျ။
ဥပမာ – ကိုယျ့အပျေါမကောငျးတဲ့ ရညျးစားတဈယောကျကို ခဈြတဲ့စိတျ ၊ သံယောဇဉျတှကွေောငျ့ တှယျကပျနတောမြိုးက ကံနဲ့မဆိုငျတော့ပါဘူး။ ကိုယျ့ရဲ့ဉာဏျနဲ့ပဲ ဆိုငျပါတယျ။ မကောငျးမှနျးသိရငျ စှနျ့လှတျရဲတဲ့ သတ်တိမြိုးမမှေးနိုငျသေးတာပါ။ကိုယျ့ကိုမပြျောရှငျစတေဲ့အရာတဈခုကို ဘာလို့လကျမလှတျနိုငျတာလဲ …သခြောပွနျစဉျးစားကွညျ့ပါ။ မငျးရဲ့မာနကွောငျ့လား ၊ အတ်တကွောငျ့လား ၊ ခဈြတဲ့စိတျကွောငျ့လား ?
အခဈြရေးကွောငျ့ စိတျဓာတျကနြခြေိနျမှာ တဈယောကျတညျးနလေိုကျပါ။ ဒီတဈယောကျမကောငျးတာနဲ့ အားလုံးမကောငျးဘူးလို့ သိမျးကြူံးပွီးတော့ မွငျလိုကျရငျတော့ မငျးမှားသှားပါလိမျ့မယျ။ကိုယျ့ရဲ့စိတျဒဏျရာကွောငျ့ အားလုံးကိုကွညျ့တဲ့အမွငျဟာ ဘောငျကဉျြးသှားနိုငျပါတယျ။ ဘယျသူမှ မကောငျးဘူးလို့ မငျးအျောနတေဲ့အခြိနျ တကယျကောငျးပွီး သစ်စာရှိတဲ့လူစားမြိုးမငျးပတျဝနျးကငျြမှာရှိနတောကို သတိမထားမိဘဲ လှဲသှားနိုငျတယျ။
လောလောဆယျ မငျးဆီမှာဖွဈနတေဲ့ ပွဿနာတှဟော မငျးအသိဉာဏျနဲ့ ဘယျလောကျထိ ဖွရှေငျးနိုငျလဲဆိုတာကို လောကကွီးက စမျးသပျနတေဲ့သဘောပါ။ ပွဿနာတဈခုကို မငျးနိုငျအောငျလုပျမလား … ၊အရှုံးပေးမလား ?အနိုငျအရှုံးဆိုတာ မငျးလုပျရပျပျေါမှာပဲ မူတညျတယျ။ မငျးရဲ့အသိဉာဏျတှေ ၊ ရငျ့ကကျြမှုတှနေဲ့ပဲ တိုကျရိုကျသကျဆိုငျနမှောပါ။
” If there isawill there isaway ” တဲ့ ။ စိတျဆန်ဒပွငျးပွရငျ နညျးလမျးဆိုတာ ရှိပွီးသားပါ။ ကိုယျ့ရဲ့အခကျခဲကို ရငျဆိုငျကြျောလှားခငျြရငျ နညျးလမျးတှအေ့ောငျရှာရမယျ။ အဲ့ဒီနညျးလမျးတှနေို့ငျဖို့ဆိုတာလညျး မငျးရဲ့စိတျဆန်ဒပွငျးပွနမှေ ဖွဈမယျ။
အရာရာတိုငျးဟာ ဖွဈပွီးပကျြနတောပါ။ ဘယျအရာမှာ မတညျမွဲဘူး ။ ဘယျအခြိနျမှာအရာအားလုံး ပွီးဆုံးသှားမယျဆိုတာ မသိပမေယျ့ ဉာဏျပညာကို ကောငျးကောငျးအသုံးခနြိုငျတဲ့သူဟာ လောကဓံရဲ့ရိုကျခတျမှုတှကွေုံလာတဲ့အခါ သူမြားတှလေောကျ တျောရုံ မတုနျလှုပျတော့ဘူး။ ဒါတှအေားလုံး တဈခြိနျမှာပွီးဆုံးသှားမယျလို့ နှလုံးသှငျးထားတယျ။ ဘယျကိစ်စမဆို သတိလေးကပျပွီး ဖွဈလာနိုငျတာတှကေို ကွိုတငျ မှနျးဆပါ။ ဖွဈလာရငျလညျး ငါဘယျလိုရငျဆိုငျမယျဆိုတာကို တှကျခကျြထားရငျ ပြာယာခတျနစေရာမလိုတော့ဘူး။ တညျတညျငွိမျငွိမျ အေးဆေးစှာနဲ့ပဲ ဖွရှေငျးသှားနိုငျမှာပါ။
ဒါကွောငျ့ တဈခြို့ ကိစ်စတှဟော ကံနဲ့မဆိုငျ ၊ ဉာဏျနဲ့သာ ဆိုငျပါတယျ။ အကောငျးဆုံး စဉျးစားတှေးတော ဆုံးဖွတျနိုငျကွပါစေ …